196s Lauren Graham က Ellen ၏ &#39;မီးလောင်ရာမေးခွန်းများ&#39; ကိုဖြေသည် images and subtitles
ကောင်းပြီ၊ မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖတ်မယ်။ သင်စိတ်ထဲပေါ်လာသောပထမ ဦး ဆုံးအဖြေကိုဖြေရန်လိုသည်။ ထို့နောက် - [DING] ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သို့သော်၎င်းသည်ရိုးသားသည့်အဖြေဖြစ်ရမည်။ ချစ်သူများနေ့မနက်ဖြန်ဖြစ်ပါတယ် တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်သင်ပြုသမျှအချစ်ဆုံးကဘာလဲ [ရယ်သံများ] ငါ - [DING] အဘယ်သူမျှမပြီးနောက်ပြီးနောက်။ ငါမှာမရှိဘူးလား အဲဒါပြproblemနာလား ဟုတ်တယ်။ အိုး တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်သင်ပြုသမျှအချစ်ဆုံးကဘာလဲ? သငျသညျကောငျးကငျစာရေးဆရာများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ပါ။ ငါယှဉ်ပြိုင်လို့မရဘူး Portia ကမြို့ထဲကထွက်သွားတိုင်းသူနဲ့ကျွန်တော်မပေါင်းဘူးဆိုရင်, \_ t ငါသူမကိုအံ့အားသင့်ခဲ့တယ် ထိုအခါငါဟိုတယ်ခေါ်ပါ။ ထိုအခါငါက set up ။ ပြီးတော့သူတို့ကနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်နဲ့နှင်းဆီပွင့်ပွင့်လေးတွေကိုထည့်လိုက်တယ် သူမ၏အိပ်ရာပေါ်မှာ။ ဒါကြောင့်သူမအခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အခါအိပ်ယာတစ်ခုလုံး နှလုံး - ပုံနှင်းဆီပွင့်ချပ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ Ellen၊ မင်းက kabillionaire တစ်ယောက်ပဲ! မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ [ရယ်သံများ] သင်က kabillionaire တစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုပါ၊ ငါစဉ်းစားဟန်, ugh! [ရယ်သံများ] မင်းလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲ? [DING] ဘားပေါ်တွင်ကခုန် ပြီးနောက်! [DING] [ရယ်သံများ] ပြီးနောက်။ ဟုတ်လား။ ကောင်းပါပြီ။ သင်ဖုန်းခေါ်ဖို့မလိုပါလား? သင်တစ် ဦး တည်းသာကစားနေသည်။ [ရယ်သံများ] ဒါဟာငါ့ကို Jeopardy စဉ်းစားစေသည်။ ပြီးတော့ ... အကယ်၍ မင်းမှာ ... ချက်ချင်းပဲ ဒါဟာ Jeopardy နဲ့တူတယ်။ ကောင်းပါပြီ။ ဒါဟာလုံးဝ Jeopardy နဲ့မတူဘူး။ နံပါတ် [ရယ်သံများ] တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးအရာကဘာလဲ။ ဖတ်ပါ။ [DING] တောင်းပန်ပါတယ် အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ မင်းအကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ ငါကုန်းသံကိုကြားတယ် ဘာ? ငါစာဖတ်ခြင်းအဘို့အ hissed တယ်ထင်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါ၊ အိုး အိုကေ။ ဟင့်အင်း၊ ငါတို့မှာမြွေတွေပဲရှိတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကဘာလဲ။ အရက်။ [ရယ်သံများ] အရက်။ [ရယ်သံများ] သင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုနေသည် ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ သငျသညျလိုင်းများမှတဆင့်လှန်လှောကြည့်နေလျှင် မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီဗွီမှာတွေ့လားမင်းကြည့်မလား။ ဘယ်တော့မှမ [DING] သဲကန္တာရကျွန်းပေါ်ရှိမည်သည့်ပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုသင်ယူမည်နည်း။ တစ် ဦး ကမှတ်စုစာအုပ်, တစ် ဦး ကလောင်အမည်နှင့်အချို့သော tequila ။ [ရယ်သံများ] [DING] တက်ကီလာ! [လက်ခုပ်သံများ] ယခုအပတ်၌သင်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးအရာကဘာလဲ သ? ဒီမှာဖြစ်ခြင်း မင်းကိုလွမ်းတယ် ငါလည်းမင်းကိုလွမ်းခဲ့တယ် [DING] [ရယ်သံများ] မင်းမင်းကြယ်ပွင့်ကိုနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့မင်းကမင်းကိုဘယ်သူရိုက်ခဲ့တာလဲ။ ငါရွှေကမ္ဘာလုံးမှာဒယ်နီယယ် Craig နောက်ကွယ်မှတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုအခါငါတစ်ခုခုပြောခဲ့သည်။ ထိုအခါသူကရယ်တယ်။ ထိုမင်းသည် hahaha တူ! ထိုအခါငါဟုတ်တယ်, oh, ငါရယ်ရယ်, ဟုတ်တယ်? [ရယ်သံများ] သူကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ သူကကောင်းတယ် သူကချစ်စရာလေး။ [DING] သင်နားမလည်တဲ့ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲ။ ငါဖြစ်ပျက်ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ၏ဤမျှလောက်နားမလည်ကြဘူး သူတို့ကကျယ်ပြန့်တယ်၊ သူတို့ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတယ်၊ \_ t သူတို့ခါးမှာနေတာလဲ ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှမကူညီဘူး [ရယ်သံများ] ငါသဘောတူတယ်။ [လက်ခုပ်သံများ] ဟုတ်လား ကျယ်ပြန့်, ဖြတ်တောက်။ ကောင်းပါပြီ။ မင်းဘာအကြောင်းလိမ်ပြောလဲ ကိုယ့်ဆရာဝန်သွားတယ်။ ငါ ၅'၉ ပေါ့ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၅'၉ "ရှိခဲ့တယ် ဆရာ ၀ န်ကကျွန်တော်ဟာ ၅'၉ မဟုတ်ဘူး "ဟုပြောသည်။ ငါက ၅'၈ " ဒါကြောင့်ငါ 5'9 ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုငါ့အသက်ကိုတပြင်လုံးကိုလိမ်ခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး ငါကအကြောင်းတကယ်ရူးတယ်။ 5'9 "ဒီလောက်အေးတာပေါ့မဟုတ်လား။ [DINGING] မဟုတ်ပါ။ Zoey ၏ထူးခြားသော Playlist သည်တနင်္ဂနွေနေ့များအား NBC တွင် ၉း၀၀ နာရီတွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ စောင့်ကြည့်ပါ သူမသီဆိုသည်။ ထိုမိန်းမသည်ဘားပေါ်မှာ။ ပြီးတော့သူမကကခုန်တယ်။ ငါတို့ပြန်လာခဲ့မယ်
Lauren Graham က Ellen ၏ &#39;မီးလောင်ရာမေးခွန်းများ&#39; ကိုဖြေသည်
< start="0.27" dur="1.08"> ကောင်းပြီ၊ မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖတ်မယ်။ >
< start="1.35" dur="1.83"> သင်စိတ်ထဲပေါ်လာသောပထမ ဦး ဆုံးအဖြေကိုဖြေရန်လိုသည်။ >
< start="3.18" dur="0.15"> ထို့နောက် - >
< start="4.019" dur="0.708"> ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ >
< start="4.727" dur="2.323"> သို့သော်၎င်းသည်ရိုးသားသည့်အဖြေဖြစ်ရမည်။ >
< start="7.05" dur="1.68"> ချစ်သူများနေ့မနက်ဖြန်ဖြစ်ပါတယ် >
< start="8.73" dur="2.61"> တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်သင်ပြုသမျှအချစ်ဆုံးကဘာလဲ >
< start="13.98" dur="1.18"> [ရယ်သံများ] >
< start="15.66" dur="0.79"> ငါ - >
< start="17.1" dur="2.64"> အဘယ်သူမျှမပြီးနောက်ပြီးနောက်။ >
< start="19.74" dur="1.79"> ငါမှာမရှိဘူးလား >
< start="21.53" dur="1.17"> အဲဒါပြproblemနာလား >
< start="22.7" dur="0.61"> ဟုတ်တယ်။ >
< start="23.31" dur="0.33"> အိုး >
< start="23.64" dur="2.292"> တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်သင်ပြုသမျှအချစ်ဆုံးကဘာလဲ? >
< start="25.932" dur="1.718"> သငျသညျကောငျးကငျစာရေးဆရာများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ပါ။ >
< start="27.65" dur="0.96"> ငါယှဉ်ပြိုင်လို့မရဘူး >
< start="28.61" dur="2.52"> Portia ကမြို့ထဲကထွက်သွားတိုင်းသူနဲ့ကျွန်တော်မပေါင်းဘူးဆိုရင်, \_ t >
< start="31.13" dur="0.78"> ငါသူမကိုအံ့အားသင့်ခဲ့တယ် >
< start="31.91" dur="0.96"> ထိုအခါငါဟိုတယ်ခေါ်ပါ။ >
< start="32.87" dur="1.08"> ထိုအခါငါက set up ။ >
< start="33.95" dur="3.18"> ပြီးတော့သူတို့ကနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်နဲ့နှင်းဆီပွင့်ပွင့်လေးတွေကိုထည့်လိုက်တယ် >
< start="37.13" dur="0.843"> သူမ၏အိပ်ရာပေါ်မှာ။ >
< start="37.973" dur="1.917"> ဒါကြောင့်သူမအခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အခါအိပ်ယာတစ်ခုလုံး >
< start="39.89" dur="1.29"> နှလုံး - ပုံနှင်းဆီပွင့်ချပ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ >
< start="41.18" dur="1.71"> Ellen၊ မင်းက kabillionaire တစ်ယောက်ပဲ! >
< start="42.89" dur="1.44"> မင်းလုပ်နိုင်တယ်။ >
< start="44.33" dur="1.17"> [ရယ်သံများ] >
< start="45.5" dur="2.333"> သင်က kabillionaire တစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုပါ၊ >
< start="47.833" dur="1.55"> ငါစဉ်းစားဟန်, ugh! >
< start="49.383" dur="1.727"> [ရယ်သံများ] >
< start="51.11" dur="2.98"> မင်းလုပ်ဖူးသမျှထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲ? >
< start="54.59" dur="0.84"> ဘားပေါ်တွင်ကခုန် >
< start="55.43" dur="1.344"> ပြီးနောက်! >
< start="57.67" dur="0.896"> [ရယ်သံများ] >
< start="58.566" dur="0.754"> ပြီးနောက်။ >
< start="59.32" dur="0.52"> ဟုတ်လား။ >
< start="59.84" dur="0.42"> ကောင်းပါပြီ။ >
< start="60.26" dur="0.85"> သင်ဖုန်းခေါ်ဖို့မလိုပါလား? >
< start="61.11" dur="1.13"> သင်တစ် ဦး တည်းသာကစားနေသည်။ >
< start="62.24" dur="0.5"> [ရယ်သံများ] >
< start="62.74" dur="2.35"> ဒါဟာငါ့ကို Jeopardy စဉ်းစားစေသည်။ >
< start="65.09" dur="2.24"> ပြီးတော့ ... အကယ်၍ မင်းမှာ ... >
< start="67.33" dur="0.73"> ချက်ချင်းပဲ >
< start="68.06" dur="1.23"> ဒါဟာ Jeopardy နဲ့တူတယ်။ >
< start="69.29" dur="1.03"> ကောင်းပါပြီ။ >
< start="70.32" dur="1.25"> ဒါဟာလုံးဝ Jeopardy နဲ့မတူဘူး။ >
< start="71.57" dur="0.5"> နံပါတ် >
< start="72.07" dur="0.635"> [ရယ်သံများ] >
< start="72.705" dur="1.625"> တစ်ယောက်တည်းလုပ်ဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးအရာကဘာလဲ။ >
< start="74.33" dur="0.39"> ဖတ်ပါ။ >
< start="75.28" dur="0.5"> တောင်းပန်ပါတယ် >
< start="75.78" dur="0.573"> အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ >
< start="76.353" dur="0.917"> မင်းအကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ >
< start="77.27" dur="0.94"> ငါကုန်းသံကိုကြားတယ် >
< start="78.21" dur="0.59"> ဘာ? >
< start="78.8" dur="1.8"> ငါစာဖတ်ခြင်းအဘို့အ hissed တယ်ထင်ပါတယ်။ >
< start="80.6" dur="1.085"> မဟုတ်ပါ၊ >
< start="81.685" dur="0.5"> အိုး >
< start="82.185" dur="0.925"> အိုကေ။ >
< start="83.11" dur="3.85"> ဟင့်အင်း၊ ငါတို့မှာမြွေတွေပဲရှိတယ်။ >
< start="86.96" dur="3.92"> ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကဘာလဲ။ >
< start="90.88" dur="0.6"> အရက်။ >
< start="91.48" dur="1.386"> [ရယ်သံများ] >
< start="92.866" dur="0.924"> အရက်။ >
< start="93.79" dur="1.39"> [ရယ်သံများ] >
< start="95.18" dur="2.03"> သင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သလိုနေသည် >
< start="97.21" dur="0.7"> ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ >
< start="97.91" dur="1.68"> သငျသညျလိုင်းများမှတဆင့်လှန်လှောကြည့်နေလျှင် >
< start="99.59" dur="1.792"> မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီဗွီမှာတွေ့လားမင်းကြည့်မလား။ >
< start="101.382" dur="0.718"> ဘယ်တော့မှမ >
< start="103.04" dur="3.335"> သဲကန္တာရကျွန်းပေါ်ရှိမည်သည့်ပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုသင်ယူမည်နည်း။ >
< start="106.375" dur="3.038"> တစ် ဦး ကမှတ်စုစာအုပ်, တစ် ဦး ကလောင်အမည်နှင့်အချို့သော tequila ။ >
< start="109.413" dur="0.986"> [ရယ်သံများ] >
< start="111.385" dur="1.479"> တက်ကီလာ! >
< start="112.864" dur="2.966"> [လက်ခုပ်သံများ] >
< start="115.83" dur="2.29"> ယခုအပတ်၌သင်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးအရာကဘာလဲ >
< start="118.12" dur="1.05"> သ? >
< start="119.17" dur="0.51"> ဒီမှာဖြစ်ခြင်း >
< start="119.68" dur="0.77"> မင်းကိုလွမ်းတယ် >
< start="120.45" dur="2.514"> ငါလည်းမင်းကိုလွမ်းခဲ့တယ် >
< start="123.464" dur="0.996"> [ရယ်သံများ] >
< start="124.46" dur="3.44"> မင်းမင်းကြယ်ပွင့်ကိုနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့မင်းကမင်းကိုဘယ်သူရိုက်ခဲ့တာလဲ။ >
< start="127.9" dur="2.79"> ငါရွှေကမ္ဘာလုံးမှာဒယ်နီယယ် Craig နောက်ကွယ်မှတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ >
< start="130.69" dur="0.99"> ထိုအခါငါတစ်ခုခုပြောခဲ့သည်။ >
< start="131.68" dur="0.66"> ထိုအခါသူကရယ်တယ်။ >
< start="132.34" dur="1"> ထိုမင်းသည် hahaha တူ! >
< start="133.34" dur="2.345"> ထိုအခါငါဟုတ်တယ်, oh, ငါရယ်ရယ်, ဟုတ်တယ်? >
< start="135.685" dur="1.215"> [ရယ်သံများ] >
< start="136.9" dur="1.86"> သူကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ >
< start="138.76" dur="0.66"> သူကကောင်းတယ် >
< start="139.42" dur="0.5"> သူကချစ်စရာလေး။ >
< start="140.92" dur="2.41"> သင်နားမလည်တဲ့ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲ။ >
< start="143.33" dur="3.59"> ငါဖြစ်ပျက်ရဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ၏ဤမျှလောက်နားမလည်ကြဘူး >
< start="146.92" dur="2.01"> သူတို့ကကျယ်ပြန့်တယ်၊ သူတို့ဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတယ်၊ \_ t >
< start="148.93" dur="1.05"> သူတို့ခါးမှာနေတာလဲ >
< start="149.98" dur="1.934"> ဒါကဘယ်သူ့ကိုမှမကူညီဘူး >
< start="151.914" dur="1.97"> [ရယ်သံများ] >
< start="153.884" dur="0.5"> ငါသဘောတူတယ်။ >
< start="154.384" dur="0.5"> [လက်ခုပ်သံများ] >
< start="154.884" dur="0.982"> ဟုတ်လား >
< start="155.866" dur="3.464"> ကျယ်ပြန့်, ဖြတ်တောက်။ >
< start="159.33" dur="1.4"> ကောင်းပါပြီ။ >
< start="160.73" dur="1.767"> မင်းဘာအကြောင်းလိမ်ပြောလဲ >
< start="162.497" dur="1.083"> ကိုယ့်ဆရာဝန်သွားတယ်။ >
< start="163.58" dur="0.63"> ငါ ၅'၉ ပေါ့ >
< start="164.21" dur="1.208"> ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ၅'၉ "ရှိခဲ့တယ် >
< start="165.418" dur="1.612"> ဆရာ ၀ န်ကကျွန်တော်ဟာ ၅'၉ မဟုတ်ဘူး "ဟုပြောသည်။ >
< start="167.03" dur="1.62"> ငါက ၅'၈ " >
< start="168.65" dur="2.805"> ဒါကြောင့်ငါ 5'9 ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုငါ့အသက်ကိုတပြင်လုံးကိုလိမ်ခဲ့ကြပြီ။ >
< start="171.455" dur="3.135"> ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး >
< start="174.59" dur="2.36"> ငါကအကြောင်းတကယ်ရူးတယ်။ >
< start="176.95" dur="4.408"> 5'9 "ဒီလောက်အေးတာပေါ့မဟုတ်လား။ >
< start="182.88" dur="0.5"> မဟုတ်ပါ။ >
< start="186.122" dur="3.108"> Zoey ၏ထူးခြားသော Playlist သည်တနင်္ဂနွေနေ့များအား NBC တွင် ၉း၀၀ နာရီတွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ >
< start="189.23" dur="0.66"> စောင့်ကြည့်ပါ >
< start="189.89" dur="0.57"> သူမသီဆိုသည်။ >
< start="190.46" dur="0.84"> ထိုမိန်းမသည်ဘားပေါ်မှာ။ >
< start="191.3" dur="0.69"> ပြီးတော့သူမကကခုန်တယ်။ >
< start="191.99" dur="1.82"> ငါတို့ပြန်လာခဲ့မယ် >